जसका निम्ति ‘पेसा’ थिएन राजनीति - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
जसका निम्ति ‘पेसा’ थिएन राजनीति
जुन बेला विष्णुबहादुर मानन्धर कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल हुनुभयो, त्यस बेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चमक बेग्लै थियो ।
एउटा क्रान्तिकारीको विचलन किन हुन्छ ? विष्णुबहादुर मानन्धरले आफ्ना अन्तर्वार्तामा कम्युनिस्टमा आउने विचलनको आलोचना गर्नुभएको छ ।
चैत्र २१, २०७७ मोहनविक्रम सिंह
कामरेड विष्णुबहादुर मानन्धरको निधन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि एउटा ठूलो क्षति हो । इतिहास प्रसिद्ध रौतहटको किसान आन्दोलनमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । पहिले उहाँ नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।
पछि कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल हुनुभएको थियो । नेकपाको चौथो केन्द्रीय कमिटीमा उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा सामेल गरिएको थियो । पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री डा. केशरजंग रायमाझीसित हाम्रो मतभेद हुँदा उहाँ रायमाझीको पक्षमा सामेल हुनुभएको थियो । तर, पछि उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा बेग्लै पार्टी गठन गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँ लगातार वामपन्थी आन्दोलनमा संलग्न रहँदै आउनुभएको थियो । त्यही क्रममा पछिल्लो चरण उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सामेल हुनुभएको थियो ।
२००७ सालको आन्दोलनका बेला उहाँ धनगढी र नेपालगन्जको मोर्चामा लड्नुभएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताका कतिपय व्यवहारका कारण उहाँ लामो समयसम्म ने.कामा बस्न सक्नुभएन । उहाँले २००८ सालमै त्यस पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो । र, कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल हुनुभयो ।
उहाँ तराईको एउटा ठूलो जमिनदार परिवारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो । आफूले अपनाएको मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तका कारण उहाँ सर्वप्रथम आफ्नै परिवारविरुद्ध संघर्षमा उत्रनुभयो । त्यो संघर्ष बढ्दै गयो । र, संघर्षले रौतहटको ऐतिहासिक किसान आन्दोलनको रूप लियो । त्यस किसान आन्दोलनलाई का. तुल्सीलाल अमात्यले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । त्यसमा विष्णुबहादुरको पनि अग्रणी भूमिका थियो ।
त्यस किसान आन्दोलनका कारण रौतहट पार्टीको एउटा बलियो गढ बन्न पुग्यो । त्यसैको परिणाम थियो, २०१५ सालको चुनावमा पार्टीले ४ वटा संसद् सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो, जसमध्ये २ वटा रौतहटकै थिए । रौतहटमा पार्टीको आधार त्यति शक्तिशाली बन्नुपछाडिको कारण विष्णुबहादुरको सफल र सही नेतृत्व पनि थियो । पछि देशका सबै भागमा जस्तै रौतहटमा पनि किसान आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो । र, त्यसको परिणामस्वरूप त्यहाँ पार्टीको स्थिति पनि कमजोर भयो ।
२०१४ सालमा नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन काठमाडौं फोहरा दरबारमा सम्पन्न भएको थियो । त्यो महाधिवेशनमा डा. केशरजंग रायमाझी नेतृत्वमा आए । उनको नेतृत्वमा पार्टीले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा लियो । त्यसको असर किसान आन्दोलनमा पनि पर्‍यो । देशका सबै भागमा किसान आन्दोलन शिथिल हुँदै गए ।
रुसको २० औं पार्टी महाधिवेशन (कांग्रेस) पछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै दक्षिणपन्थी भड्कावको लहर आयो । नेपाल पनि त्यो लहरबाट बच्न सकेन । नेपालमा दक्षिणपन्थी भड्कावका मुख्य नेता डा. केशरजंग रायमाझी नै थिए । उनको त्यो भ्रमको असर कैयौं क्रान्तिकारी कम्युनिस्टमाथि पर्‍यो । यो सत्य हो । र, यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ, त्यो असर विष्णुबहादुर माथि पनि केही न केही पर्‍यो । उच्च जमिनदार वर्गबाट आएर स्वयम् आफ्नै परिवारविरुद्ध संघर्ष गर्ने, रौतहटको ऐतिहासिक किसान आन्दोलनका एउटा प्रमुख सेना नै डा. केशरजंग रायमाझीको असरमा पर्नु सामान्य घटना थिएन । त्यसले के बताउँछ भने एक क्रान्तिकारीमा खाली इमानदारिता, त्याग र बलिदानको स्प्रिट भएर मात्रै पुग्दैन । उसमा वैचारिक स्पष्टता पनि हुनुपर्छ । विष्णुबहादुर जस्तो क्रान्तिकारी नेता किन रायमाझीजस्तो दक्षिणपन्थी नेताको असरमा पर्नुभयो ? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । तर, त्यो उहाँसित सम्बन्धित व्यक्तिगत प्रश्न मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयम् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग पनि सम्बन्धित एक गम्भीर प्रश्न हो । त्यो प्रश्नको सही जवाफ निकालेपछि नै क्रान्तिकारी आन्दोलनको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नु सम्भव हुनेछ । त्यसमाथि नै नेपाल र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि भविष्य निर्भर रहनेछ ।
दक्षिणपन्थी भड्कावका कारण मात्रै कम्युनिस्टहरूले पतनको बाटो समात्छन् भन्ने होइन, उग्र ‘वामपन्थी’ भड्कावका कारण पनि कैयौं कम्युनिस्टको पतन हुने गरेको छ । ठूल्ठूला क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट नेता वा त्यसरी हजारौं कार्यकर्ताले पतनको बाटो समातेका उदाहरण विश्व र नेपालकै इतिहासमा पनि कम छैन । पूर्वमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रका उदाहरण पनि हाम्रैसामु छन् । उनीहरूको नेतृत्व पंक्ति कहाँसम्म साँच्चै क्रान्तिकारी स्प्रिटद्वारा निर्देशित थियो ? यसबारे बेग्लाबेग्लै मत र विवाद हुन सक्छन् । तर, उनीहरूका हजारौं कार्यकर्ता त्याग र बलिदानको स्प्रिटले समर्पित भएको कुरामा कुनै शंका छैन । त्यस प्रकारका संगठनले पछि गएर दक्षिणपन्थी बाटो समाते ।
वास्तवमा एउटा क्रान्तिकारी पार्टी वा क्रान्तिकारीको विचलन किन हुन्छ ? यो साँच्चिकै गम्भीर प्रश्न हो । स्वयं विष्णुबहादुरले पनि आफ्ना कतिपय अन्तर्वार्तामा कम्युनिस्टमा आउने त्यस प्रकारका विचलनको आलोचना गर्नुभएको छ र त्यसमाथि दुःख प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँ र उहाँजस्ता सबै क्रान्तिकारीप्रतिको हाम्रो सच्चा श्रद्धाञ्जली उहाँले प्रकट गर्ने गरेका त्यस प्रकारका दुःख र चिन्ताको निवारण गर्नु नै हुनेछ या, कमसेकम त्यसका लागि सकेसम्म योगदान दिनु ।
मुख्य प्रश्न यो होइन कि उहाँ रायमाझीको नेतृत्वको संगठनमा सामेल हुनुभयो । धेरै मानिस त्यो वा त्यस्तै प्रकारको कुनै संगठनमा गएर पूरै बिग्रेका हुन्छन् । तर, त्यो संगठनले पनि विष्णुबहादुरको स्प्रिट, इमानदारिता र आस्थालाई बिगार्न सकेन । उहाँ सधैं एक सच्चा कम्युनिस्टको रूपमा जीवित भइरहनुभयो र अन्त्यमा त्यही रूपमै उहाँको निधन भयो । जीवनभरि नै उहाँले आफ्नो विचार र आस्थाको रक्षाका लागि संघर्ष गरिरहनुभयो ।
उहाँ सर्वप्रथमतः आफ्नै परिवारका वर्गीय स्वार्थविरुद्ध संघर्षमा उत्रनुभयो । त्यसबेला उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्ने जुन सोचाइ देखाउनुभयो, त्यो उहाँमा जीवनभरि नै रहिरह्यो । कुनै क्रान्तिकारीमा हुनुपर्ने त्यो नै एउटा सबैभन्दा उच्च गुण हो । त्यो गुणको कमीले नै कुनै क्रान्तिकारीलाई विभिन्न प्रकारका विचलन, पतन वा गद्दारीसम्मको बाटोमा लैजान्छ । तर, विष्णुबहादुर त्यस प्रकारको व्यक्तिगत स्वार्थबाट धेरै माथि उठेको पाइन्छ । त्यो यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि पछि उहाँको नेतृत्वमा बनेको संगठनलाई कैयौंपल्ट सरकारमा जाने अवसर प्राप्त भयो, तर उहाँ कहिल्यै सरकारमा जानुभएन बरु आफ्ना साथीहरूलाई नै सरकारमा पठाउने नीति अपनाउनुभयो । २०१५ सालको चुनावलाई हेरौं, त्यो चुनावमा पनि उहाँ स्वयम् उम्मेदवार बन्नुभएन र आफ्ना २/२ साथीहरूलाई नै चुनावमा विजय बनाउनुभयो । उहाँमा सुरुदेखि नै उच्च प्रकारको त्यागको भावना रहेको पाइन्छ ।
डा. केशरजंग रायमाझीले प्रतिक्रियावादी सत्ता वा राजाका अगाडि आत्मसमर्पण गरेका थिए । तर, त्यसको असर विष्णुबहादुरमा परेन । त्यो कुरा यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, पछि उहाँ राजाविरुद्धको संघर्षमा पनि उत्रनुभयो । २०४६ को आन्दोलनमा उहाँको सहभागिताले त्यो पक्षबारे बताउँछ । त्यसपछि पनि उहाँ लगातार संघर्षमा अघि बढिरहनुभयो । पार्टीमा रायमाझीविरुद्धको संघर्षका बेला उहाँ रायमाझीको पक्षमा गएको भए पनि रायमाझीको राजावादी स्प्रिट उहाँले अपनाउनुभएन । त्यसैले उहाँ राजाविरुद्धको संघर्षमा उत्रन सक्नुभएको थियो । प्रश्न रायमाझीको मात्र थिएन । रुसको २० औं पार्टी महाधिवेशन (कांग्रेस) ले विश्वव्यापी रूपमै जुन वैचारिक भ्रम ल्याएको थियो, त्यसबाट संसारका धेरै कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावित भएका थिए । त्यसबेला संसारका कैयौं कम्युनिस्ट पार्टीले रुसको पार्टीलाई नै सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी ठानेका थिए । रायमाझी त्यही पार्टीसँग सम्बन्धित थिए । रायमाझीको पक्षमा उहाँ (का. विष्णुबहादुर) जानुको कारण त्यो पनि बनेको हुन सक्छ । जे होस्, त्यो कुराले (रायमाझीको प्रभावले) उहाँलाई सधैंका लागि बाँधेर राख्न सकेको थिएन ।
समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने विष्णुबहादुर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अमूल्य सम्पत्ति हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन देश, जनता तथा पार्टी र क्रान्तिका लागि समर्पण गर्नुभयो । त्योबाहेक उहाँको कुनै बेग्लै व्यक्तिगत करियर वा पेसा रहेन ।
बनारस विश्वविद्यालयमा पढ्ने भर्खरका युवक विष्णुबहादुर २००७ सालको आन्दोलनमा सामेल हुनुभयो । लगातार अगाडि बढिरहनुभयो । जुन बेला उहाँ पार्टीमा सामेल हुनुभयो, त्यो बेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चित्र बेग्लै प्रकारको थियो । त्यो बेला विश्वको एउटा ठूलो भागमा समाजवादी व्यवस्था कायम थियो र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै नै शक्तिशाली थियो । पछि त्यसमा कैयौं प्रकारका घुम्ती र उतार–चढाव आए । अब विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतन भएको छ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अत्यन्त कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक प्रकारले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको उथलपुथलबाट संसारको कुनै पनि देशको कम्युनिस्ट पार्टी वा कम्युनिस्टहरू बचेनन् । का. विष्णुबहादुरको पार्टी जीवन पनि त्यसको असरबाट अगाडि बढ्यो । त्यसक्रममा कैयौं कम्युनिस्ट पार्टी वा कम्युनिस्टहरू आन्दोलनबाटै बाहिरिन पुगेका छन् । तर, त्यो सम्पूर्ण स्थितिको मुख्य पक्ष के भने ती सबैका बीचबाट उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशातिर लगातार अगाडि बढ्दै आउनुभयो ।
उहाँमा कहिल्यै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट निराशा, विचलन वा पलायनको प्रवृत्ति देखापरेन । त्यो उहाँको जीवनको प्रधान पक्ष हो । उहाँ आफ्नो जीवनको अन्त्यसम्म त्यसमा अडिग रहनुभयो । तर, जो जीवित छौं, हामी सबैका लागि त्यस प्रकारको सौभाग्य प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन ? त्यो हाम्रो बाँकी जीवनले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामी सबै परीक्षामा छौं । तर, का. विष्णुबहादुर त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण भइसक्नुभयो । हामी सबैले उहाँबाट शिक्षा र प्रेरणा लिनुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७७ १०:०३
एक ‘धुरन्धर ऐतिहासिक’ को दु:खान्त
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागिरे, इतिहासका अरूअरू अध्यापक–अन्वेषकहरूभन्दा धनवज्र वज्राचार्यको ल्याकत कता हो कता माथिल्लो भए पनि प्रचलित पद्धतिबाट उनी पराजित हुनपुगे । पराजयको विषादले उनी क्रमश: आधिव्याधिग्रस्त भई अकालमै कीर्तिशेष भए ।’
चैत्र २०, २०७७ सुजित मैनाली
नेपालको इतिहास लेखन परम्परामा धनवज्र वज्राचार्य (वि.सं. १९८८–२०५१) को अग्रणी स्थान छ । नेपाली इतिहासका मूल सामग्रीहरूको पहिचान गरी तिनको परिशिलन र प्रकाशन गर्ने प्रामाणिक कोटीका एकाध ऐतिहासिकमध्येमा उनी पर्छन् ।
नेपालको ज्ञात इतिहास आरम्भ हुनु अघिदेखि शाहकालसम्मको अवधिबारे प्रकाश पार्नेगरी एकल र अन्य व्यक्तिसँगको सहकार्यमा उनले थुप्रै ग्रन्थको लेखन, सम्पादन, अनुवाद र व्याख्या गरेका छन् । यसका अतिरिक्त विभिन्न पत्रपत्रिकामा उनका अनुसन्धानमूलक लेख छापिएका छन् । यी कामका कारण उनी नेपाली इतिहासबारे काम गरेका त्यस्ता अग्रगण्य ऐतिहासिकमध्येमा दरिन्छन्, जसबारे चर्चा गर्दा उनको व्यक्तित्वको मात्र नभई नेपाली इतिहास लेखन परम्पराकै एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायको चर्चा हुनपुग्छ ।
काठमाडौंको मासंगल्लीमा बस्ने वज्राचार्य परिवारमा वि.सं. १९८८ चैत १६ गते धनवज्रको जन्म भएको थियो । उनका बाबुको नाम दुर्गावज्र र आमाको नाम तीर्थकुमारी हो । धनवज्रको परिवार पुस्तौंदेखि वैद्य पेसामा संलग्न थियो । धनवज्र सानो छँदा मासंगल्लीस्थित उनको पुख्र्यौली घरमा पीयूषवर्षी औषधालय सञ्चालित थियो ।
वैद्य पेसामा दक्ष बन्न आयुर्वेदको ज्ञान चाहिन्छ । आयुर्वेदका आधार–ग्रन्थ संस्कृत भाषामा लेखिएका छन् । ती ग्रन्थ छिचोल्न संस्कृत भाषाबारे जानकार हुनुपर्छ । यस कुराको महसुस धनवज्रका जेठा दाजु दिव्यवज्र (वि.सं. १९७६–२०५६) ले गरेका थिए । दिव्यवज्र आयुर्वेद विद्याको खस्कँदो अवस्थाप्रति चिन्तित पनि थिए । यो कुरा आफ्ना सहपाठीसमेत रहेका संस्कृत वाङ्मयका विद्वान पं. नयराज पन्त (वि.संं. १९७०–२०५९) को सान्निध्यमा रहेर उनले वि.सं. २०१६ देखि २०२० ‘आयुर्वेद–रक्षा’ नामक पर्चाका १६ वटा अंक छापेको सन्दर्भबाट पनि पुष्टि गर्छ ।
आयुर्वेद र संस्कृत भाषाप्रतिको दिव्यवज्रको यस्तो रुझानका कारण उनले पाठशाला चलाउन भनेर नयराजलाई आफ्नो पुख्र्यौली घरको एउटा क्षेत्र नि:शुल्क प्रदान गरे । त्यसबाट प्राचीन भारतीय पद्धतिको शिक्षा प्रणाली ब्युँताई संस्कृत वाङ्मयका धुरन्धर पण्डितहरूको पुस्ता तयार गर्ने ध्येयसहित पाठशाला सञ्चालन गर्न खोजिरहेका नयराजलाई सहयोग मिल्यो । घरमै पाठशाला खुल्दा नयराजबाट आफ्ना भाई धनवज्र र छोरो गौतमवज्रले संस्कृत भाषामा प्रशिक्षित हुने मौका पनि पाउँछन् भन्ने दिव्यवज्रको बुझाइ थियो ।
वि.सं. १९९७ मा स्थापना भएको नयराजको पाठशालामा धनवज्र शिष्य बने । त्यसअघि उनले देवीदत्त पराजुली, श्रीनाथ पाण्डे, ऋषभदेव शास्त्री आदिसँग पढेका थिए । वि.सं. २००३ मा १६ वर्षको छँदा धनवज्रले नयराजलाई गुरु थापे । त्यस घटनाले धनवज्रको जीवनलाई नयाँ मोड दियो । गुरुको प्रेरणाबाट उनले व्याकरण र काव्यसहित संस्कृत वाङ्मय, प्राचीन लिपि, पञ्चाङ्ग, प्राचीन संवत्, अभिलेख र प्रतिमालक्षण अध्ययन आदि विषयको कठोर प्रशिक्षण लिए । वैद्य पेसामा प्रविण बन्न भनेर नयराजलाई गुरु थाप्न पुगेका उनी प्रकारान्तरमा अब्बल ऐतिहासिकका रूपमा ख्यात भए ।
नयराजको पाठशाला भिन्न थियो । अन्यत्र सयमा ३३ अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराइन्थ्यो । त्यस्तो शिक्षालाई नयराजले त्रिखण्डी अर्थात् एक तिहाइमात्रै बुझे पुग्ने शिक्षा भनी पन्छाए । विकल्पमा उनले पढेको विषयमा विद्यार्थीहरू शतप्रतिशत दक्ष बन्नैपर्ने शिक्षणविधि लागू गरे । प्राचीन भारतीय शिक्षापद्धति पछ्याउँदै उनले आधार ग्रन्थहरूको नित्य पाठ गरी तिनलाई कण्ठ गर्नुपर्ने नियम बसाले । एकपटक प्रमाणपत्र हासिल गरेको विद्यार्थी सधैँ विद्वान कहलिन सक्दैन, आफूले आर्जन गरेको विद्वता कायम राख्न शास्त्रलाई शस्त्रझैं निरन्तर साँध लगाइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत रहेर उनले विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र नदिने र पाठशालाबाट बिदा भएपछि पनि विद्यार्थीहरूले आजीवन स्वाध्यायमा प्रवृत्त हुनुपर्ने मान्यता लागू गरे । एकसाथ दुई भाषामा पाण्डित्य हासिल गर्न असम्भव छ भनी उनले पाठशालामा अंग्रेजी लगायत पश्चिमी भाषाको अध्ययनमाथि रोक लगाए ।
एकसाथ परम्परागतसँगै नूतन प्रतित हुने शिक्षा प्रणाली भएको पाठशालामा धनवज्रले लगनशील भई आठ वर्षसम्म अध्ययन गरे । यसबारे उनी स्वयंले लेखेका छन्, ‘श्रीगुरु नयराज पन्तको निर्देशनमा संशोधनमण्डलद्वारा सञ्चालित नयाँ ढङ्गको ‘आठवर्षे पढाइ’ वि.सं. २००३ देखि २०१२ भित्र मैले पूरा गरेंँ । ‘प्रमाणपत्रको भरमा होइन; कार्यक्षमताको भरमा अगाडि बढ’ भन्ने सो विद्यापीठको घोषित सिद्धान्त छ ।’
पाठशालामा छँदा उनी नयराजका सर्वाधिक योग्य, भरपर्दा र प्रिय शिष्य बने । अध्ययन सिध्याएपछि पनि उनी पाठशालामै शिक्षक र शोधार्थीका रूपमा सक्रिय रहे ।
पाठशालामा अध्ययनरत धनवज्रसहितका शिष्यहरू इतिहास सम्बन्धी अध्ययनमा प्रविण बनेपछि कल्पना र यथार्थ छ्यासमिस मिसिएका वंशावलीहरूलाई मुख्य आधार बनाई नेपाली इतिहास लेख्ने क्रममा अल्पविराम लाग्यो । पाठशालाले अभ्यासमा ल्याएको शोधविधिका कारण वंशावलीलगायत सामग्रीमा उपलब्ध विवरणलाई तत्कालीन अभिलेखमा उपलब्ध तथ्यहरूसँग रुजु गराउने र त्यस्ता विवरणहरू एकअर्कासँग बाझिए तत्कालीन अभिलेख्य प्रमाणलाई आधिकारिक मान्ने विधिले त्यसपछिका दिनमा प्रश्रय पायो । नेपालमा इतिहास लेखनको यस्तो विधि संस्थागत गराउन नयराज र उनका आधा दर्जनभन्दा बढी शिष्यहरूको मुख्य हात छ । त्यसमध्ये पनि धनवज्रको योगदान विशिष्ट छ । लिच्छविकालदेखि शाहकालसम्मका महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूको पाठ उतार गरी उनले गरेको तिनको अनुवाद र व्याख्यालाई माथ गर्ने ग्रन्थ त्यसयता प्रकाशन हुन नसकेको तथ्यले पनि यस्तो दाबीलाई बल पुर्‍याउँछ ।
नयराजको पाठशालामा विद्या आर्जन गर्दै जाँदा पर्चा लेखनबाट धनवज्रको औपचारिक लेखन यात्रा सुरु भयो । इतिहास संशोधनप्रति नयराजको गहिरो अभिरुचि थियो । उनकै प्रेरणाबाट उनका शिष्यहरू पनि इतिहास संशोधन सम्बन्धी काममा लागे । यही मेसोमा धनवज्रले वि.सं. २००९ देखि सहपाठीहरूसँग मिलेर ‘इतिहास–संशोधन’ शीर्षकमा पर्चा लेख्न सुरु गरे ।
‘इतिहास–संशोधन’को भाषा आक्रामक थियो । वि.सं. २०२० असार ७ गते भोलानाथ पौडेलसँग मिलेर धनवज्रले प्रकाशन गरेको ‘इतिहास–संशोधन’मा भनिएको छ, ‘रायल–नेपाल–एकेडेमीका सदस्य सचिव श्रीसूर्यविक्रम ज्ञवाली बी.ए.बी.टी.ज्यू पढ्ने, खोज्ने काममा नलागी जथाभावी कल्पित कुरा लेखी नेपालको इतिहासलाई भ्रष्ट पार्दै हुनुहुन्छ ।’ त्यसअघि वि.सं. २०१६ मंसिर १५ गते प्रकाशित ‘इतिहास–संशोधन’मा धनवज्रले ‘...तीनै थरी धूर्त (विदेशीका भक्त, चाकडीबाज, जातिगत भ्रमात्मक कुरा फैलाउने) तथा टप्परटुइयाँदेखि हामीले सावधान भई रहनुपरेको छ र तिनको रहस्योद्घाटन गर्दै जानुपरेको छ’ भनी लेखेका थिए । त्यसैताका पाठशालाबाट ‘सावधान–पत्र’ शीर्षकमा छापिएका इतिहासप्रधान पर्चाहरूको लेखनमा पनि धनवज्र संलग्न भए ।
‘इतिहास–संशोधन’मा उठान गरिएका विषय प्राज्ञिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए तापनि तिनको भाषा पाठ्यसामग्री बन्न नमिल्ने किसिमको थियो । यही कुरा महसुस गरी धनवज्रकै सम्पादनमा वि.सं. २०१९ मा पाठशालाले जगदम्बा प्रेसबाट ‘इतिहास–संशोधनको प्रमाण–प्रेमय (पहिलो भाग)’ छाप्यो । त्यसमा व्यक्तिलक्षित आक्षेपहरू हटाएर इतिहास सम्बन्धी लेखनमा बारम्बार दोहोरिएका त्रुटि औँल्याइ सपार्ने काम गरिएको छ । पाठ्यसामग्रीका रूपमा मान्यता पाओस् भनेर नै यो ग्रन्थ तयार गरिएको थियो भन्ने कुरा नयराजले लेखेको यस ग्रन्थको ‘उपोद्घात’मा रहेको निम्न श्लोकबाट पनि सिद्ध हुन्छ–
सच्चा नै इतिहासजन्य घटना यो देशमा फैलियून,
विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तक पनि प्रामाणीकै नै पढून् ।
भन्ने आशयले कडा श्रम गरी यो साधना गर्दछु,
धेरैका ननिका कुराकन सही बाँचिरहेको म छु ।।
पाठशालामा छँदा धनवज्रले इतिहास सम्बन्धी लेख छाप्ने, ऐतिहासिक अभिलेख र पत्र खोजी गरी प्रकाशन गर्ने, संस्कृतमा लेखिएका नेपाली इतिहास सम्बन्धी सामग्रीहरू नेपालीमा उल्था गर्ने आदि काम पनि गरे ।
वि.सं. २०१८ मा त्यस पाठशालाले विधिवत रूपमै आफ्नो नाम ‘संशोधन–मण्डल’ राख्यो । त्यसको तीन वर्षपछि वि.सं. २०२१ वैशाखबाट संशोधन–मण्डलले नेपालको इतिहास लेखन परम्परामा सार्थक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले इतिहास–प्रधान त्रैमासिक पत्रिका ‘पूर्णिमा’को प्रकाशन सुरु गर्‍यो । पत्रिकाका सम्पादकद्वय थिए, गौतमवज्र वज्राचार्य र महेशराज पन्त । संशोधन–मण्डलमा माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीले तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने परिपाटी रहेकाले धनवज्रबाट गौतमवज्र र महेशराजले पनि शिक्षा लिएका थिए । यस अर्थमा उनीहरू धनवज्रका शिष्य थिए । धनवज्रले ‘पूर्णिमा’को प्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसका अतिरिक्त ‘पूर्णिमा’मा छापिनेलगायत सामग्रीको लेखनमा संशोधन–मण्डलका सदस्यहरूलाई परिचालन र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मा पनि गुरुले धनवज्रलाई नै दिएका थिए ।
‘पूर्णिमा’को पहिलो अंकमा धनवज्रको नाममा ‘श्रीकलहाभिमानी राजा’ शीर्षकको लेख छापियो, जुन लिच्छविकालीन शासक अंशुवर्माबारे थियो । त्यस लेखको आरम्भमै भनिएको छ, ‘नेपालको इतिहासमा अरू कालमा भन्दा लिच्छविकालमा अनेक कुरामा विशिष्ठता पाइन्छन् । त्यसबेलाका विद्याको तह, आकर्षक कला, व्यवस्थित शासन पद्धतिले हाम्रो मनमा प्रभाव नपारी छोड्दैन ।’ यसबाट धनवज्रमा लिच्छविकालप्रति बढी अभिरुचि थियो भन्ने कुरा झल्किन्छ । यो कुरा ‘पूर्णिमा’मा त्यसपछिका दिनमा छापिएका उनका लेखहरूको विषयवस्तु र वि.सं. २०२८ मा संशोधन–मण्डलबाट अलग भएपछि उनले लेखेका ग्रन्थहरूको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन गर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ ।
संशोधन–मण्डलमा आबद्ध भएर धनवज्रले इतिहास लेखन परम्परामा सार्थक हस्तक्षेप गरे पनि त्यसबाट उनको वृत्ति चल्न सकेन । पर्चा र पत्रिका बेचेर आएको पैसाबाट इतिहास–संशोधकहरूको गर्जो टर्नसक्ने अवस्था थिएन । काठमाडौंको हुनेखाने परिवारका मानिस भए पनि नियमित आम्दानीको स्रोत नहुँदा उनको आर्थिक जीवन खस्किँदै गएको थियो । विद्याको एकोहोरो उपासक बन्दा धनकी देवीबाट उनको परिवारको आर्थिक जीवनमा वज्रपात हुनथालेको थियो । यो कुरा धनवज्रका पुत्र अशोकले ‘नेपालको इतिहासलेखनमा धनवज्र वज्राचार्यको योगदान’ शीर्षकको किताबका लेखक सुरेन्द्र केसीसँग भनेको निम्न कुराले पनि सिद्ध गर्छ, ‘खालि पढ्ने–पढाउने र अनुसन्धान गर्ने काममा मात्र लाग्दा मेरा पिताजीको आर्थिक अवस्था ठीक थिएन । मेरो जन्मदिनको दिन उहाँले मलाई केही चीज दिन खोज्नुभयो । तर, उहाँसँग कत्ति पनि पैसा थिएन । उहाँले कसै गरे पनि पैसा खोज्न सक्नुभएन । अनि साइकल चढेर पाटन जानुभयो र पूर्णिमाको ग्राहकसँग भुक्तानी गरेर पैसा ल्याउनुभयो ... तर त्यो पैसा संशोधन–मण्डलको कोषमा जम्मा गर्नुपथ्र्याे । उहाँले संशोधन–मण्डलको कोषमा जम्मा गरेर त्यो पैसा फेरि संशोधन–मण्डलबाट सापटी लिएर आफ्नो मनको धोको पूरा गर्नुभयो, मेरो जन्मोत्सवमा मलाई केही उपहार दिएर । मेरो बाको मनमा खल्लो पार्ने यस्तो आर्थिक संकट त कति परे कति...।’
जीविकोपार्जनका लागि धनवज्रले वि.सं. २०२७ भदौ १ गतेदेख त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल अध्ययन संस्थान (जसको नाम पछि गएर ‘नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्र’ राखियो) मा तीनवर्षे करार सेवा अन्तर्गत जागिर सुरु गरे । त्यसप्रति प्रसन्नता व्यक्त गर्दै नयराजले वि.सं. २०२७ चैत २३ गते आफ्नो डायरीमा लेखेका छन्, ‘धनवज्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अस्थायी अध्यापक पाएकोमा म अत्यन्त प्रसन्न छु । उनको यो पद स्थायी होस् । विश्वविद्यालयका उच्च प्राध्यापकहरूले पाएसरह सम्मान तथा वृत्ति उनलाई प्राप्त होस् । उनको आदर्शले संशोधन–मण्डलका अरू सदस्यहरूको पनि प्रगति हुन सकोस् भन्ने मेरो भित्री इच्छा छ ।’
त्यसउप्रान्त पनि धनवज्रको पाण्डित्य खस्किन नपाओस् भनी नयराजले योजना बनाए, ‘धनवज्र वज्राचार्य प्रतिसप्ताह एक दिन आफूले पढेको अष्टाध्यायी, महाकाव्य, अमरकोष, रघुवंशहरू कण्ठस्थ सुनाउन् र हर्षचरितको अर्थ गरुन् । उनको लेख प्राञ्जल भइसकेको हुनाले उनले लेख देखाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
त्यतिन्जेल धनवज्रलाई गुरु र संशोधन–मण्डलको आदर्श बोझिलो लाग्न थालिसकेको थियो । उनी थाकिसकेका थिए । संस्कृत वाङ्मयको अन्वेषणमार्फत नेपालमा बौद्धिक पुनर्जागरण ल्याउने संशोधन–मण्डलको ध्येयमा निरन्तर लागिपर्ने अठोटलाई उनको निरन्तर गहिरिँदै गएको विपन्नताले ओझेल पारिसकेको थियो । अन्तत: वि.सं. २०२८ मा उनले गुरुसमक्ष राजीनामा बुझाए, ‘पूज्य श्रीगुरुका चरणतलमा प्रणामपूर्वकपत्रमिदम् । बराबर शरीरमा अस्वस्थ्यता आउन लागेको र कामको बोझले गर्दा आजकल बढी परिश्रम गर्न नसक्ने भएँ । यसो हुनाले पढाइ स्वीकार गराउने काम पूरा गर्न सकूँला जस्तो लागेन । यसकारण कति इच्छा नभए तापनि संशोधन–मण्डलको सदस्यताबाट राजीनामा दिँदैछु । वचन पूरा गर्न नसकेकोमा क्षमा चाहन्छु ।’
संशोधन–मण्डलबाट अलग हुने धनवज्रको निर्णय उनको जीवनको दोस्रो महत्त्वपूर्ण मोड थियो । यसबारे सुरेन्द्र केसीले लेखेका छन्, ‘हुन त आधारभूत रूपमा नयराज पन्तको पाठशालामा गुरुले सिकाएको इतिहास लेखनको कौशललाई उनले परित्याग गरेनन् । त्यहाँ पनि नयाँनयाँ कृतिहरू लेख्ने, छपाउने कार्य जारी नै रह्यो । प्रामाणिक र विचारोत्तेजक लेखरचनाहरू प्रकाशित हुँदै रहे । तर, संशोधन–मण्डलको जुन गुरुत्वपूर्ण कार्य उनीसमेतको समूहले मण्डलमा रहेर गर्ने गरेको थियो, अब त्यो संलग्नता, प्रतिवद्धता र अभियान भने उनको जीवनको लक्ष्य रहेन ।’
केसीले भनेको कुरा धेरै हदसम्म सही भए पनि संशोधन–मण्डलबाट अलग भएपश्चात उनको गुरुत्वपूर्ण कार्य खस्कियो भन्ने कुरा सकार्न सकिँदैन । त्यसपछिका दिनमा पनि उनको कार्यकुशलतामा ह्रास आएन । बरु बटवृक्ष अर्थात् गुरुको छायाबाट अलग्गिएपछि उनको प्रतिभाले अझ फिँजारिने मौका पायो ।
वि.सं. २०३० मा ‘लिच्छविकालका अभिलेख’ नामक उनको बृहत् ग्रन्थ नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्रबाट छापियो । त्यसले उनलाई देशभित्र र बाहिर ख्याति दिलायो । त्यस ग्रन्थलाई उनको बौद्धिक जीवनको उत्कर्ष मान्न सकिन्छ । नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रबाट आजका मितिसम्म प्रकाशित किताबमध्ये यो अब्बल त हुँदै हो, साथै नेपाली इतिहासबारे लेखिएका उत्कृष्ट किताबहरूमध्ये पनि एक हो ।
उनको निधनपछि नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रबाट ‘मध्यकालका अभिलेख’ (२०५६), ‘गोपालराज वंशावलीको ऐतिहासिक विवेचना’ (२०६४) र ‘पूर्वमध्यकालका अभिलेख’ (२०६८) छापिए । अन्य अनुसन्धाताहरूसँग मिलेर उनले जीवनकालमै थुप्रै किताबहरूको अनुवाद, सम्पादन तथा लेखन गरे, जसमध्ये ‘गल्लीमा फ्याँकिएका कसिंगर’ (२०१८), ‘त्रिरत्नसौन्दर्यगाथा’ (२०१९), ‘दोलखाको ऐतिहासिक रूपरेखा’ (२०३१), ‘नुवाकोटको ऐतिहासिक रूपरेखा’ (२०३२), ‘पाञ्चाली शासनपद्धतिको ऐतिहासिक विवेचना’ (२०३५), ‘शाहकालका अभिलेख’ (पहिलो भाग) (२०३७), ‘द गोपालराज वंशावली’ (सन् १९८५) आदि केही हुन् । यसका अतिरिक्त ‘पूर्णिमा’, ‘कन्ट्रिब्युसन्ज् टु नेपालीज् स्टड्इज’, ‘मधुपर्क’, ‘गोरखापत्र’, ‘खेलुइता’ लगायत पत्रपत्रिकामा उनका अनुसन्धानमूलक लेख छापिएका छन् ।
संशोधन–मण्डलबाट अलग भएका धनवज्रको प्राज्ञिक जीवन परिस्कृत बन्दै जाने क्रम नरोकिए पनि जीवनको नयाँ मोडले उनको व्यक्तित्वको ढाँचालाई चाहिँ पूरै बदलिदियो । पाण्डित्यमा उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रका सहकर्मीहरूभन्दा अब्बल थिए । विलियम हेज्लिटरलाई उद्धृत गरी महेशराज पन्तले लेखेझैं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूमाझ ‘उनको सबैभन्दा नराम्रो अरू कसैको सबभन्दा राम्रोभन्दा राम्रो’ हुने अवस्था थियो । तर, उनीसँग कक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र थिएन । यसले गर्दा करारमा जागिर सुरु गरेपछि आफूभन्दा कमजोर पात्रको अनुयायीसरह देखिएर उनले अनुसन्धानकर्ममा सरिक हुनुपर्‍यो । धनवज्रको यस्तो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थायी जागिरेहरूलाई आ–आफ्नो कीर्ति चम्काउने अवसर मिल्यो ।
उनको नामभन्दा अगाडि तुलसीराम वैद्यको नाम राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘गोरखाको ऐतिहासिक सामग्री’ (२०२९) र हेमन्त राणा नाम अगाडि राखेर ‘टिस्टुङ–चित्लाङ भेगका ऐतिहासिक सामग्री’ (२०२९) नामक किताब छापिए । त्यसबखतको धनवज्रको निरीहताबारे महेशराज पन्तले लेखेका छन्, ‘धनवज्र वज्राचार्यले ... उनको खुट्टामा पनि बाँध्न नसुहाउने भने पनि हुने कालिदासको शब्द सापटी लिने हो भने ‘नायं मे पादरजसापि तुल्य:’ अर्थात् ‘मेरो खुट्टाको धूलो बराबर पनि छैन यो’ जस्ता, आफूभन्दा विद्या र वयस् दुवैमा कान्छाको नाउँ अगाडि राखी आफ्ना पुस्तक छाप्नुपर्‍यो ।’
प्रमाणपत्र बिनाको शिक्षा लिएका धनवज्र प्रचलित औपचारिक शिक्षा लिएका आफूभन्दा अल्पपठित सहकर्मी र त्यस्तो शिक्षालाई मात्र मान्यता दिने विश्वविद्यालयको परिवेशबीच च्यापिए । यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा उनलाई कमजोर पार्दै लग्यो । संशोधन–मण्डलमा छँदाताकाको उनको आत्मविश्वास र रवाफ हरायो । यस सन्दर्भमा प्रयागराज शर्मा र कमलप्रकाश मल्लले भनेको निम्न कुरा महेशराजले धनवज्र सम्बन्धी आफ्नो लेखमा उद्धरण (अंग्रेजीबाट अनुवादसहित) गरेका छन्, ‘(नाउँ चलेका मानिसहरूको विरोधमा) जवानीमा (शिक्षाविषयक) जिहाद छेड्ने कामबाट झन्डै पर्लक्क पल्टी आफू बढी नरम हुँदा उनले कहिल्यै कसैलाई खिस्रिक्क पारेर वा कसैको आलोचना गरेर चित्त दुखाएनन् । आफ्नो क्षेत्रका, आफूसँगै काम गर्ने साथीहरू र कम उमेरका विद्वान्हरूलाई उनी धेरैजसो सदाशयमय सुझाव दिन्थे । ‘कन्ट्रिब्युशन्ज् टु नेपालीज् स्टड्इज्’मा छापिन आएका लेखको विषयमा त्यस पत्रिकाका सम्पादकको हैसियतले यहाँ यो लेख नछापिने भयो वा सच्याएर ल्याऊ भनी कसैलाई भन्न पनि उनी अक्सर धकाउँथे ।’
सायद यस्तै बदलावको कारण होला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रवेश गरेपछि उनी गुरु नयराजबाट टाढिँदै गए । यसबारे महेशराजको लेखको निम्न अंश उद्धरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ, ‘पढ्न आएदेखि गुरुपूर्णिमाको दिन गुरुपूजा गर्न र दसैँमा टीका थाप्न गुरुकहाँ आउने धनवज्र वज्राचार्य विस्तारै ती पर्वमा पनि आउन छोडे । गुरुचेलाको सामान्य भलाकुसारी पनि बाटामा भेट हुँदामात्रै हुनथाल्यो ।’
प्राज्ञिक जीवनका आरोह–अवरोह पार गर्दै जाँदा धनवज्रले प्रचलित पाश्चात्य पद्धतिको शिक्षालाई न त पूरै नकार्नसके, न त आफूले सिकेको गुरुकुलीय शिक्षालाई सर्लक्कै सकार्नसके । त्यस्तो द्विविधामा अल्झिएका उनको प्रतिभालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूले दुरुपयोग गरे । त्यस्ता अध्यापकको पङ्क्तिमा संशोधन–मण्डलका प्रखर आलोचक कमलप्रकाश मल्ल (वि.सं. १९९३–२०७५) पनि थिए । संशोधन–मण्डलका सदस्यहरूसँग पौंठेजोरी खेल्न तम्सिए पनि उनी इतिहास अध्ययनबारे राम्रोसँग प्रशिक्षित थिएनन् । उनलाई लिच्छविकाल र मल्लकालमा प्रचलित भाषा, लिपि, संवत् आदिको पर्याप्त ज्ञान थिएन । यसकारण इतिहास सम्बन्धी अन्वेषण गर्ने काममा उनी चाहेजति फैलिन सकिरहेका थिएनन् ।
त्यतिकैमा संशोधन–मण्डल छोडेर आएका धनवज्रसँग कमलप्रकाशले सम्पर्क बढाए । अन्तत: दुईजनाको सहलेखनमा वि.सं. २०४२ (सन् १९८५) मा जर्मनीबाट ‘द गोपालराज वंशावली’ प्रकाशन भयो । मल्ल राजा स्थितिराजको पालामा तयार भएको गोपालराज वंशावली भ्रष्ट संस्कृत र नेवारी भाषामा लेखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, यसका अक्षर पढ्न र अर्थ गर्न तत्कालीन भाषा र लिपिमा बलियो पकड चाहिन्छ । त्यस्तो क्षमता धनवज्रसँग थियो । संशोधन–मण्डलमा छँदै उनले त्यहाँका अन्य शोधार्थीहरूसँग मिलेर गोपालराज वंशावली पढेका थिए । त्यसमा आधारित उनका केही लेख ‘पूर्णिमा’मा छापिएका पनि थिए । संशोधन–मण्डलबाट निस्किएपछि धनवज्रले गोपालराज वंशावलीका अक्षरहरू उतारी तिनलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने कष्टसाध्य काम गरे । धनवज्रले गरेको वंशावलीको नेपाली अनुवादलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने लगायत काम गरी कमलप्रकाश मल्लले त्यस ग्रन्थको सहलेखकमा धनवज्रसँगै आफ्नो पनि नाम राखे, जसबारे ‘द गोपालराज वंशावली’को भूमिकामा पनि उल्लेख छ ।
धनवज्रले वि.सं. २०३१ मा एसियाली अध्ययन संस्थानमा उपप्राध्यापक सरहको स्थायी नियुक्ति पाए । वि.सं. २०४२ मा उनी इतिहास विषयका सहप्राध्यापकमा पदोन्नति भए । त्यस्ता धुरन्धर ऐतिहासिकलाई सहप्राध्यापकमै सीमित गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रतिभाको कदर गर्ने एउटा उत्तम अवसर गुमायो ।
समयक्रममा धनवज्रलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापले गाँज्यो । आफूबाट फगत फाइदा उठाउन खोज्नेहरूबाट घेरिएका उनलाई औपचारिक शिक्षाको डिग्री नहुनु लगायत कारणले चिन्तित तुल्याएको थियो भनी जगदीशचन्द्र रेग्मीले लेखेका छन् । समयक्रममा उनको मुटु र किड्नीमा समस्या देखिन थाल्यो । उनले नियमित डायलसिस गर्नुपर्ने अवस्था आयो । उपचारका क्रममा सञ्चित बिदाहरू सकिएपछि विश्वविद्यालयले उनलाई सेवामा फर्किन ताकेता गर्न थाल्यो । अन्तत: उनले जागिरबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्‍यो । त्यसपछिका दिनमा रोगसँग संघर्ष गरी बाँच्नु नै उनको जीवनको एकमात्र प्रयोजन बन्न पुग्यो ।
वि.सं. २०५१ असार २० मा नियमित डायलसिस गर्न भनेर उनी वीर अस्पताल पुगेका थिए । अस्पतालको शैयामा उनको निधन भयो । उनको मृत्युबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा महेशराजले जगदीशचन्द्रको माथि उल्लेखित कुरामा सहमति जनाउँदै लेखेका छन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागिरे, इतिहासका अरू अरू अध्यापक–अन्वेषकहरूभन्दा धनवज्र वज्राचार्यको ल्याकत कता हो कता माथिल्लो भए पनि प्रचलित पद्धतिबाट उनी पराजित हुनपुगे । त्यही पराजयको विषादले गर्दा उनी क्रमश: आधिव्याधिग्रस्त भई अकालमै कीर्तिशेष भए ।’
धनवज्रको शेषपछि नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्रले सुरेन्द्र केसीमार्फत धनवज्रबारे किताब लेखाएर र उनीसमेतको नाममा विद्वत्वृत्ति स्थापना गरेर उनलाई बाँचुन्जेल यथोचित कदर दिन कञ्जुस्याइँ गरी गरेको भूल सपार्न खोजेको छ । केन्द्रलाई प्राज्ञिक उचाइ दिलाउन यथेष्ट योगदान गरेका धनवज्रप्रति केन्द्रले गर्नसक्ने काम अरू पनि छन् । शेषपछि उनको परिवारले केन्द्रलाई बुझाएका अप्रकाशित पाण्डुलिपिहरू प्रकाशन गर्ने तत्परता देखाएर केन्द्रले धनवज्रको ऋण तिर्ने शृङ्खला सुरु गर्न सक्छ । ‘लिच्छविकालका अभिलेख’ लगायत धनवज्रका किताब बजारमा पाउन छाडेको वर्षौं बितिसकेको छ । बजारमा ती किताबको माग अद्यापि छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरबाटै उनको किताबको फोटोकपी बिक्री भइरहेको छ ।
योजनाविहीनताका कारण तिनको पुनर्मुद्रण गर्ने काममा केन्द्र उदासीन रहँदै आएको छ । आफैँले ती ग्रन्थ पुनर्मुद्रण गरेर अथवा अन्य प्रकाशन संस्थालाई पुनर्मुद्रण गर्ने अनुमति दिएर केन्द्रले धनवज्रका किताबहरू सर्वसुलभ बनाउन सक्छ । यसका साथै केन्द्रबाट प्रकाशित हुने ‘कन्ट्रिब्युशन्ज् टु नेपालीज् स्टड्इज्’को सम्पादक मण्डलले धनवज्र सम्बन्धी विशेषांक प्रकाशन गरी आफ्ना संस्थापक सम्पादकप्रति आदर दर्शाउन सक्छन् । सन् १९९६ मा छापिएको ‘कन्ट्रिब्युशन्ज् टु नेपालीज् स्टड्इज् २३(१)’ को अंक धनवज्रको नाममा समर्पित छ । यद्यपि यसमा छापिएका २० वटा लेखमध्ये तीनवटा मात्र धनवज्रबारे छन् । हरेक वर्ष उनको नाममा एउटा विद्वत सम्भाषण अथवा प्राज्ञिक गोष्ठी गरेर पनि केन्द्रले धनवज्रको योगदानको कदर गर्ने र एकजना विलक्षण कलमजीवीलाई सदैव सम्झिरहने सन्दर्भ दिलाउन सक्छ ।
(शनिबार प्रकाशन हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करण ‘शनिबार विशेष’बाट ।)
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ १९:५४